बौद्ध धर्मको पहिलो नोबल सत्य
पहिलो नोबल सत्य
पथमा पहिलो चरण
बौद्ध धर्मको अध्ययन चार नोबल सच्चाइको साथ सुरू हुन्छ, बुद्धद्वारा बोल्ने शिक्षणले आफ्नो प्रकाशको पछि लाग्ने पहिलो प्रवचनमा। सत्यले सम्पूर्ण धर्म समावेश गर्दछ। बौद्ध धर्मका सबै शिक्षाहरू तिनीहरूबाट प्रवाह गर्छन्।
पहिलो नोबल सत्य अक्सर बौद्ध धर्मको बारेमा सुनेको पहिलो कुरा हो, र प्रायः यो अंग्रेजीमा अनुवाद गरिएको छ "जीवन पीडा छ।" ठीक छ, मान्छे प्राय: आफ्नो हात फेंकन्छ र भन्नुहोस्, यो निराशावादी छ ।
हामीले किन जीवनको आशाको आशा गर्नुपर्दैन?
दुर्भाग्यवश, "जीवन पीडा हुन्छ" ले वास्तवमा बुद्धले के भन्नु भएको बताउँछ। उनीहरूले के गरे भन्ने कुरालाई हेरौं।
संस्कृत र पालीमा पहिलो नोबल सत्य दुकखा पवित्र (संस्कृत) वा डुका-सत्य्या (पाली) को रूपमा व्यक्त गरिएको छ, अर्थ "डुक्खाको सत्य"। डुक्काखा पाली / संस्कृत शब्द हो जुन प्रायः "पीडा" को रूपमा अनुवाद गरिएको छ।
पहिलो नोबल सत्य, त्यसोभए, सबै को बारे मा दुकखा, जो केहि छ। यस सत्यलाई बुझ्न, कुन डुकखा हुन सक्छ को एक भन्दा बढी दृश्यको लागि खुला रहनुहोस्। डुक्खाले दुःखको अर्थ बुझ्न सक्छ , तर यो पनि अर्थ, तनाव, असहमति, असंतोष र अन्य चीजहरू पनि हुन सक्छ। बस "पीडा" मा फंसिएको छैन।
र थप पढ्नुहोस्: "जीवन पीडा छ? यो के हो?"
यहाँ बुद्धले आफ्नो पहिलो प्रमोदवनमा डुक्खाको बारेमा बताएका छन्, पाली बाट अनुवाद गरिएको। ध्यान दिनुहोस् कि अनुवादक, थेरेवडा भिक्षु र विद्वान तन्सारारिक भिक्खू, को अनुवाद "डुकखा" को रूपमा "तनाव" भनिन्छ।
"अब यो, भिक्षु, तनाव को महान सत्य हो: जन्म तनावपूर्ण छ, उमेर तनावपूर्ण छ, मृत्यु तनावपूर्ण छ; दुःख, विलाप, दुखाइ, दुःख, र निराशा तनावपूर्ण छन्; अविश्वसनीय संग सहयोग तनावपूर्ण छ, प्रेमबाट छुटकारा महासंघका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले भने, "संविधानसभाको म्याद थप्न सकेको छैन।"
बुद्धको कुरा भनेको होइन कि जीवनको बारेमा सबै कुरा पूर्णतया भयानक छ। अन्य उपदेशहरूमा, बुद्धले थुप्रै प्रकारको खुशीको कुरा गरे जस्तै पारिवारिक जीवनको आनन्द। तर हामी डुक्खाको स्वभावमा अझ गहिरो हौं, हामी देख्छौं कि यसले हाम्रो जीवनमा सबै चीज छान्छ, राम्रो भाग्य र आनन्दित समय सहित।
माथिको उद्धरणबाट अन्तिम क्लोजमा हेरौं - "छोटो छ, पाँच क्लिङिंग-एग्रीगेटहरू तनावपूर्ण छन्।" यो पाँच स्कान्डाको एकदम धेरै मोटेको सन्दर्भ हो, स्क्यान्डहसलाई एक व्यक्ति बनाउन को लागी घटकको रूपमा सोच्न सकिन्छ - हाम्रो शरीर, इन्द्र, विचार, भविष्यवाणी, र चेतना।
थोरभैडिन भिक्षु र विद्वान Bikkhu बोधिले लेखे,
"यो अन्तिम खण्ड - अस्तित्वको सबै कारकहरूको पाँचवटा समूहलाई सम्बोधन गर्दै - दुखाइको गहिरो आयामको कारणले दुखाइ, दुःख, र निराशाको सामान्य विचारहरू भन्दा कष्टको गहिरो आयामलाई बुझाउँछ। पहिलो महान सत्य, असफलता र सबै चीजको कट्टरपंथी अपर्याप्तता हो, यस तथ्यले गर्दा जो साम्राज्य छ र अन्ततः विनाश हुन्छ। " [ बुद्ध र तिनका शिक्षाहरू [शम्बला, 1 99 3], शमूएल बर्कोलज र शेरब चाडिनन कोनद्वारा सम्पादन गरिएको पृष्ठ 62-मा भएको चित्र]
तपाईं आफैलाई वा अन्य घटनाको बारेमा "परिश्रम" को रूपमा विचार नगर्न सक्नुहुन्न। के यो अर्थ भनेको अन्य चीजहरूको कुनै पनि स्वतन्त्र रूपमा अवस्थित छैन; सबै घटनाले अन्य घटनाले परिश्रम गरेको छ।
थप पढ्नुहोस्: निर्भर ब्यवस्थापन
निराशावादी वा यथार्थवादी?
किन हाम्रो जीवनमा सबै कुरा डुक्खा चिन्ह लगाइएको छ भनेर बुझ्न र स्वीकार गर्न महत्त्वपूर्ण छ? आशावादलाई एकताबद्ध छैन? के यो जीवनको राम्रो हुन आशा गर्न राम्रो छैन?
गुलाबी रङ चश्मेको समस्या यो हो कि यसले हामीलाई असफलताको लागि सेट गर्दछ। दोस्रो नोबल सत्यले हामीलाई सिकाउँछ, हामी जीवनको माध्यमबाट जान्छौं जुन हामीले सोचेका छौं हामी हामीलाई आनन्दित बनाउनेछौं। हामी सदैव टाढा जान्छौं र यस तरिकालाई धक्का दिन्छौं र हाम्रो मनपर्ने र नापसंद, हाम्रो इच्छा र हाम्रो डरले। अनि हामी धेरै लामो समयसम्म एक खुशीको स्थानमा बसोबास गर्न सक्दैनौ।
बौद्ध धर्मको अर्थ हो कि आफैले सुखद विश्वासमा कोकून गर्न र जीवन अझ बढी सहनशीलताको आशा गर्ने। यसको सट्टा, यो आकर्षण र विनाश र साम्सााराको चक्र को निरन्तर धक्का-खींच बाट मुक्त गर्न को एक तरीका हो। यस प्रक्रियामा पहिलो चरण डुकखाको प्रकृति बुझ्न सकिन्छ।
शिक्षकहरूले प्रायः तीन नोभेम्बरलाई जोड दिएर पहिलो नोबल सत्य प्रस्तुत गर्छन्। पहिलो अन्तर्वार्ता स्वीकृति छ - त्यहाँ पीडा वा डुकखा छ। दोस्रो एक प्रकारको प्रोत्साहन हो - डुक्खा बुझ्न सकिन्छ । तेस्रो सावधानी हो - दुकखा बुझिएको छ ।
बुद्धले हामीलाई विश्वास प्रणालीको साथ छोड्नुभएन, तर बाटोको साथ। डुकखालाई स्वीकार गरेर यो मार्ग सुरु हुन्छ र यो के छ यो हेर्नुहोस्। हामी टाढाबाट टाढा रोक्न र हामीलाई अनावश्यक छानबिन गर्ने छैन। हामी दोष असाइन रोक्न वा गुस्सा रहन्छौं किनभने जीवन हामी के हो जस्तो लाग्छ।
"हाम्रो दुखाइको पहिचान र पहिचान गर्नु एक बीमारी को निदान डाक्टर को काम जस्तै हो। उनले या त्यो भन्छन्, 'यदि म यहाँ प्रेस गर्छु, यो चोट पुर्याउँछ?' र हामी भन्छौं, 'हो, यो मेरो पीडा हो। यो भएको छ।' हाम्रो हृदयमा चोटहरू हाम्रो ध्यानको वस्तु बन्न सक्छ। हामी तिनीहरूलाई डाक्टरकहाँ देखाउँछौं, र हामी तिनीहरूलाई बुद्धमा देखाउँछौं, जसको अर्थ हामीले आफैंलाई देखाउछौं। " [ बुद्धको शिक्षण हृदय (पेरेलक्स प्रेस, 1 99 8) पृष्ठ 28-मा भएको चित्र]
थोरैडेन शिक्षक अज्न सुमाहोले हामीलाई दुःखको साथ पहिचान गर्न सल्लाह दिन्छ।
"अज्ञान व्यक्ति भन्छन्, 'म पीडा छ। म पीडा गर्न चाहँदैनौं। म मनन गर्छु र म दुखाइबाट बाहिर निकाल्न उत्प्रेरित गर्छु, तर म अझै पीडा भइरहेको छु र म पीडित हुनुहुन्न। म कसरी पीडाबाट निकाल्न सक्छु? म यसलाई छुटकारा पाउन के गर्न सक्छु? ' तर यो पहिलो नोबल सत्य होइन; यो होइन: 'म पीडा छु र म यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु।' अन्तरदृष्टि हो, 'त्यहाँ पीडा छ' ... अन्तर्दृष्टि मात्र यो व्यक्तिगत बनाउन बिना दुःख छ भनेर स्वीकार गर्दछ। " [चार चार नोबल सत्य (अमारवती प्रकाशन), पृष्ठ 9-मा भएको चित्र]
पहिलो नोब सत्य निदान हो - रोग पहिचान गर्दै - दोस्रोले रोगको कारण बताउँछ। तेस्रोले हामीलाई आश्वासन दिन्छ कि एक इलाज छ, र चौथो उपाय यो उपचार गर्दछ।
दर्शन र हलचलहरू
आत्म, कुनै आत्म, के आफैले के हो?
महा पाजापाटी र पहिलो नन
येशूको वास्तविक नाम के हो?
मड्रास: बुद्धको ह्यान्ड्स
गुरु गोबिंद सिंह (1666 - 1708)
139देखि 1912 सम्म 13 औं दिली लामा
जॉनसन राज्य कलेज प्रवेश
एडी ग्येरोरोको पारिवारिक ट्री - चार भाइहरू, तीन जेनेरेसनहरू
विभिन्न चिनियाँ डायलहरू के हुन्?
फैक्टर पेडहरूमा चौथो ग्रेड गणित पाठ
भान्सा जादूगर भनेको के हो?
Tufts विश्वविद्यालय फोटो टूर
समीक्षा: द हाइड पार्क '50 औं सालगिरह डीभिडी
'मसँग छ कसले?' गणित खेलहरू
कसरी सर्किट परीक्षक प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्
10 चीजहरु तपाईं अल्बर्ट आइंस्टीन को बारे मा नहीं जानते हो
राइट स्टेट यूनिवर्सिटी प्रवेश
हाइड्रोजन के हो?
वेलेंटाइन दिवस: धार्मिक मूल र पृष्ठभूमि
निश्चित लेख Il र शुरुआती इटालियन मा लो
रसायन विज्ञान मा Halide आयन परिभाषा
20 भन्दा धेरै बिचको बीचको क्षण कहिल्यै कैद भयो
यी मूल कुराकानी कुराकानीका साथ अंग्रेजी सिक्न सुरु गर्नुहोस्
विश्वास, आशा र प्रेम: 1 कोरिन्थी 13:13
पावर पावर - आर्किटेक्चर, युद्ध, र मेमोरी
De Chirico, Max Ernst, Magritte and Balthus: अदृश्य मा एक देखो
Castleton टॉवर: मोआबको सबैभन्दा प्रसिद्ध डेजर्ट टवर
मास प्रतिशत कसरी गणना गर्ने
आणविक शास्त्रीय परिभाषा
समह्यानमा भगवान र देवीलाई कसरी मनाउने